စင်ကာပူရှိ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဖန်လုံအိမ်ဥယျာဉ်ကြီး
ဥယျာဉ်မြို့တော်အဖြစ်အမည်တွင်တဲ့ စင်္ကာပူဟာ ဥယျာဉ်မြို့တော်ကနေ ဥယျာဉ် ထဲကမြို့ဖြစ်လာအောင် Gardens by the Bay (ကမ်းနားဥယျာဉ်ကြီးများ)အမည်ရှိ ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်ကြီးကို ၂၀၁၂ခုနှစ်ဇွန်လက စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိကရည်ရွယ် ချက်ကတော့ သစ်ပင်ပန်းမန်တွေစိုက်ပျိုးခြင်းဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံသားတွေအတွက် ပိုမိုအရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ဘ၀ကို ရစေလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါ။ ဥယျာဉ်ကြီးကို စင်္ကာပူ မြို့လည် မာရီနာရေကာတာနားက ဖို့မြေ ၂၅၀ဧကပေါ်မှာဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး ရေ ဘက်မျက်နှာမူတဲ့ ဥယျာဉ်သုံးခုနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ တောင်ဥယျာဉ်၊ အရှေ့ဥယျာဉ်၊ အလယ်ဥယျာဉ်ဆိုပြီး သုံးခုရှိတဲ့အထဲ တောင်ဥယျာဉ်က အကြီးဆုံးဖြစ်ကာ အဓိက စွဲဆောင်မှုတွေ ရှိနေတဲ့ ဥယျာဉ်ကြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အာရှတိုက်ရဲ့ ရှေ့ပြေးဥယျာဉ်ကြီးတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဆန်းသစ်တဲ့ဒီဇိုင်း ကြောင့် ၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ ကမ္ဘာ့တစ်နှစ်တာလုံးအဆောက်အအုံဆု၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်မှာ Lonely Planet ကနေပြီး Cerificate of Excellence ဆုအပါအဝင် ဆုပေါင်းများ စွာရရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ၂၀၁၅ခုနှစ်ကစပြီး ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမှန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ ဖန်လုံ အိမ်အဖြစ် ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်စာရင်းမှာ သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ ပန်းဖန်လုံအိမ် (Flower Dome) နဲ့ မိုးတိမ်တောဖန်လုံအိမ် (Cloud Forest)ဆိုပြီး ဧရာမဖန်လုံအိမ်ကြီး၂ခုရှိပါတယ်။ ဒီဖန်လုံအိမ်ကြီးတွေက ကြက်ဥခွံကြီးနဲ့တူပြီး စတီးကွန်ရက်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားလို့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး တိုင်မပါတဲ့ ဖန်လုံအိမ်တွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်လုံအိမ်တွေထဲက အပူချိန်တွေကို ၂၃မှ ၂၅ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ကြားအမြဲဖြစ်နေအောင် ညှိပေးထားပါတယ်။
Flower Dome ဘက်မှာ ပန်းတွေနဲ့ အပင်မျိုးစုံကို ဒေသအလိုက် စိုက်ပျိုးပြသ ထားပြီး ပန်းတွေကို ရာသီချိန်ပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးမျိုးပြောင်း စိုက်ပျိုးတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ၂၀၁၄ခုနှစ်က ကျွန်မရောက်ရှိခဲ့တုန်းက နှင်းဆီပန်းမျိုးစုံကို စိုက်ပျိုး ပြသထားတာတွေ့ခဲ့ရပြီး အရင်တစ်ပတ်က ထပ်ရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ သစ်ခွ ပန်းတွေကို ဝေဝေဆာဆာစိုက်ပျိုးပြသထားတဲ့ အချိန်နဲ့ကြုံကြိုက်ခဲ့ပါတယ်။ လိပ်ပြာရဲ့ တဖြည်းဖြည်းလှပလာတဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို စင်္ကာပူနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အနေနဲ့ သစ်ခွနဲ့လိပ်ပြာကို အဓိကပြသထားတာလို့သိရပါတယ်။ ၅၂နှစ်မြောက် စင်္ကာပူအမျိုးသားနေ့ကို ဂုဏ်ပြု တဲ့အနေနဲ့ လိပ်ပြာရုပ်တုပေါင်း ၅၂ခုထွင်းထုထားတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဘေးကပ်ရပ်ရှိ Cloud Forest ဖန်လုံအိမ်ဘက်မှာတော့ ဝင်ဝင်ချင်း မြူတွေ ဆိုင်းနေတဲ့ အံ့ဖွယ်ကမ္ဘာထဲရောက်သွားသလို အံ့ဩမှင်သက်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ ဖန်လုံ အိမ်ထဲရှိ ရေတံခွန်အမြင့်ကြီးကနေ ရေတွေ အရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ စီးကျနေတာကြောင့် ရေစက်လေးတွေလာစင်ပြီး ဝင်လာသူတိုင်းကို အေးမြသွားစေပါတယ်။ ဒီဘက်မှာတော့ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့်ပေ ၆၅၀၀ကျော်ရှိတဲ့ တောင်ပေါ် ရာသီဥတုဖြစ်အောင် ထိန်းညှိပေးထားကာ တောင်ပေါ်မှာတွေ့ရတတ်တဲ့ အပင်မျိုးစိတ်တွေကို စိုက်ပျိုးပြသ ထားပါတယ်။ ခလယ်မှာရှိတဲ့ ကျောက်တောင်အတုကြီးက ၁၁၄ ပေ အမြင့်ရှိတာကြောင့် တောင်ပေါ်ကနေစီးကျနေတဲ့ ရေတံခွန်ကြီးက ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး မိုးလုံလေလုံ ရေတံခွန် ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ ပိုပြီးထူးခြားစေတာကတော့ တောင်ကြီးကိုပတ်ပြီး လမ်း လျှောက်လို့ရအောင် ဖောက်ပေးထားတဲ့ မိုးပျံလမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Gardens by the Bay ကို ပိုပြီး အသက်ဝင်စေနိုင်တဲ့အရာတွေကတော့ အပြင်ဘက်ဥယျာဉ်ထဲမှာရှိတဲ့ Super Tree အမည်ရှိ သစ်ပင်တုကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစူပါသစ်ပင်ကြီးတွေဟာ နေ့ဘက်မှာ အရိပ်ရစေပြီး ညဘက်မှာတော့ မီးရောင်စုံထွန်း လင်းလာကာ သံစဉ်မျိုးစုံနဲ့ အသက်ဝင်လာလေ့ရှိပါတယ်။ အမြင့်ပေပေါင်း ၈၂ပေ ကနေ ၁၆၄ပေအထိရှိတဲ့ အပင်တုကြီး ၁၈ပင်ရှိပြီး အမြင့်ဆုံးအပင်က ၁၆ထပ်တိုက် တစ်တိုက်စာအမြင့်ရှိပါတယ်တဲ့။ အဲဒီထဲက အပင်တချို့ဟာ နေ့ဘက်မှာနေရောင် ခြည်စွမ်းအင်တွေ သိမ်းဆည်းပြီး ညဘက်မှာ လျှပ်စစ်မီးအဖြစ်ပြန်အလှဆင်အသုံးချ ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။ စူပါသစ်ပင်တွေကြားဆက်သွယ်ထားတဲ့ အမြင့် ၇၂ပေ အရှည် ၄၂၀ပေရှိတဲ့ မိုးပေါ်လမ်းကနေလည်း လျှောက်လှမ်းပြီး ဥယျာဉ်ကြီးရဲ့ အလှကို မတူညီတဲ့ရှုထောင့်ကနေ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ပါတယ်။
Gardens by the Bay မှာ ဒီလို စွဲဆောင်မှုရှိတဲ့နေရာတွေ အပြင်အခြားဥယျာဉ် တွေ၊ ရေကန်တွေများစွာနဲ့ သာယာလှပနေပါတယ်။ ပန်းချစ်သူ ပန်းဝါသနာရှင်တွေ သာမက ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေကိုပါ စွဲဆောင်ထားနိုင်တာကြောင့် လက်ရှိအ ချိန်အထိ ကမ္ဘာအနှံ့က ဧည့်သည်ပေါင်း ၃သန်းနီးပါးလာရောက်လည်ပတ်ပြီးဖြစ် တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဆလိုဗက်ကီးယားနှင့် သူ၏မြို့တော်(ယခင်တစ်ပတ်မှ အဆက် . . . . .)
ယခင်တစ်ပတ်မှ အဆက် . . . . .
Bratislava မြို့သည် ဥရောပတိုက်၏ သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးမားသော အခြားမြို့တော်များကဲ့သို့ နန်းတော်၊ ရဲတိုက်များ၊ မျှော်စင်များ၊ ဘုရားကျောင်းများ၊ ဥယျာဉ်ကြီးများ၊ ရေကန်များ၊ ပြတိုက်များ၊ တက္ကသိုလ်များ၊ ရင်ပြင်များ၊ ရုပ်တုများ၊ ရေပန်းများ စသည်တို့ဖြင့် ခမ်းနားထည်ဝါစွာတည်ရှိနေပါသည်။ ထို့ပြင် ဩစတြီးယားနိုင်ငံ ဗီယင်နာ မြို့တော်နှင့် ၃၈ မိုင်ခန့် သာကွာဝေးသဖြင့် ဗီယင်နာနှင့် Bratislava တို့သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် နိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံ၏ အနီးကပ်ဆုံးတည်ရှိနေသည့် မြို့တော်နှစ်မြို့ဖြစ်သည်။ ပထမကမ္ဘာစစ်မဖြစ်ခင် ၁၉၁၄ ခုနှစ် နှစ်ဦးကတည်းက ထိုမြို့နှစ်မြို့တွင် လျှပ်စစ်ရထားများ အပြန်အလှန် ပြေးဆွဲလျက်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယခုကာလတွင်မူ မြို့တွင်း၌ ခေတ်မီလျှပ်စစ်ရထားများ ပြေးဆွဲလျက်ရှိသည်ကို မြင်တွေ့ရပါသည်။
အေဒီ ၉၀၇ ခုနှစ်စ၍ ခံတပ်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်တမ်းရှိခဲ့ပြီး ၁၃ ရာစုနှစ်အ တွင်း အဓိက တည်ဆောက်ခဲ့သည့် Bratislava ရဲတိုက်ကြီးသည် ဒန်ညုမြစ်နံဘေးက ပေ ၂၈၀ နီးပါးမြင့်သည့် တောင်ကုန်းငယ်ပေါ်၌ ခမ်းနားစွာ တည်ရှိလျက်ရှိသည်ကို စာရေးသူတို့ မြို့တွင်းသို့ ဝင်လျှင်ဝင်ချင်း လှမ်းမြင်ခဲ့ရပါသည်။ အခြားသော ကမ္ဘာလှည့် ခရီးသည်များကဲ့သို့ သမိုင်းဝင်မြို့ဟောင်း(Old Town) ဧရိယာကို သွားရောက်ခဲ့ရာ ရှေးကျ၍ ခမ်းနားလှသည့် မြို့တော်ခန်းမ၊ အမှတ်တရပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်များ၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကော်ဖီဆိုင်များ ဝန်းရံတည် ရှိနေသည့် မြို့တော်ခန်းမရင်ပြင်၊ သမိုင်းဝင်လက်နက်ပြသထားသည့် ပြတိုက်တည်ရှိရာ St.Michael ဂိတ်၀အဆောက်အအုံတို့ ကို လေ့လာနိုင်သကဲ့သို့ Old Town အတွင်း၌ အနီရောင် ကားငယ်တွဲကားများဖြင့် လှည့်လည်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် မြို့တွင်း၌ ပေ ၂၈၀ ခန့်မြင့်သည့် St.Martin ဘုရားကျောင်း၊ သမ္မတအိမ်တော်အဖြစ် အသုံးပြုနေသည့် Grassalkovich နန်းတော်နှင့် ပါလီမန်အဆောက်အအုံတို့သည် ထင်ရှားလှသည်။
ခေတ်ဟောင်းနှင့် ခေတ်သစ်အဆောက်အအုံများ ယှဉ်တွဲတည်ရှိနေရာ ဆလိုဗက်ကီးယားအမျိုးသားဘဏ်၊ ယင်းအနီးရှိ ရေဒီယိုအသံလွှင့်ဌာနချုပ်၊ ဒန်ညုမြစ်ဖြတ်တံတားပေါ်က ပန်းကန်ပြားပျံပုံသဏ္ဌာန်မျှော်စင်နှင့် အဆင့်မြင့်ကွန်ဒိုမီနီယံများမှာ ခေတ်မီဆန်းပြားသည့် အဆောက်အအုံများပင်ဖြစ်ကြသည်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်က ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် ပန်းကန်ပြားပျံမျှော်စင်အတွင်း၌ မြို့မြင်ကွင်းကို ၃၆၀ ဒီဂရီ မြင်တွေ့နိုင်သည့် စားသောက်ဆိုင်ရှိပါသည်။ လူဦးရေ ငါးသိန်းခန့်သာ နေထိုင်သည့် Bratislava မြို့ရှိ တက္ကသိုလ်များတွင် ကျောင်းသူကျောင်း သား ၆၀၀၀၀ တက်ရောက်ပညာသင်ကြားလျက်ရှိသည်မှာလည်း ထူးခြား လှသည်။ ထို့ပြင် ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံ တစ်နိုင်ငံလုံး GDP (Gross Dom- estic Product)ပမာဏ၏ လေးပုံတစ်ပုံကျော်ကို ယင်းမြို့က ထုတ်လုပ်ပေး လျက်ရှိကြောင်းလည်း သိရသည်။
အချိန်မရသဖြင့် ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံ၏ အစိုးရရုံးစိုက်ရာ Bratislavaမြို့၌ ညအိပ်တည်းခို လေ့လာနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိသော်လည်း ယင်းနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး၊ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာများ ဖွံ့ဖြိုးထွန်းကားရာ ဗဟိုချက်မြို့ ဖြစ်သည်ဆိုခြင်းကိုမူ တဒင်္ဂမြင်တွေ့လေ့လာခဲ့ရသည်များနှင့်ပင် ယုံကြည် လက်ခံမိခဲ့ပါတော့သည်။
ဥရောပတိုက် အလယ်ပိုင်းရှိ တောတောင်ထူထပ်သော ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ် သော်လည်း တည်ငြိမ်အေးချမ်း၍ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ မှာ ဆလိုဗက်ကီးယား (Slovakia)နိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ ချက်၊ ပိုလန်၊ ယူကရိန်း၊ ဟန်ဂေရီ နှင့် ဩစတြီးယားနိုင်ငံတို့၏ အလယ်တွင် တည်ရှိ၍ ယခင်က ချက်နိုင်ငံနှင့်အတူယှဉ်တွဲ၍ ချက်ကိုဆလိုဗက်ကီးယား(Czechoslovakia)နိုင်ငံအဖြစ် ထင်ရှားခဲ့သည်။ ၁၀ ရာစု နှစ်မှ စ၍ နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့် ကာလအတွင်း အဓိကအားဖြင့် ဟန်ဂေရီတို့၏ လက် အောက်၌ရှိခဲ့သော်လည်း ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီး ၁၉၁၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၃၉ ခုနှစ်အထိ ချက် ကိုဆလိုဗက်ကီးယားအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပြီး ၁၉၃၉ မှ ၁၉၄၅ ခုနှစ်အတွင်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ် ကာလတစ်ဝိုက်တွင် ဆလိုဗက်ကီးယားအဖြစ် ခေတ္တသီးသန့်ရပ်တည်ခဲ့သည်။ ယင်း ကာလ၌ ဂျာမနီလက်အောက်ခံသဖွယ် ရှိနေခဲ့၍ ၁၉၄၅ ခုနှစ်မှ ၁၉၉၃ ခုနှစ်အထိ ချက်ကို ဆလိုဗက်ကီးယားအဖြစ်တည်ရှိခဲ့ပြီး ယခင်ဆိုဗီယက်ပြည်ထောင်စု၏ လွှမ်းမိုးမှုခံခဲ့ရ သည်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် ယင်းအနေအထားမှ တွန်းလှန်ခဲ့ကြ၍ ၁၉၉၃ ခုနှစ်၌ ချက် (Czech)နိုင်ငံနှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာလမ်းခွဲခဲ့ကြပြီး ဆလိုဗက်ကီးယားနိုင်ငံအဖြစ် ပေါ်ထွန်း လာခဲ့သည်။ ကတ္တီပါလမ်းခွဲ(Velvet Divorce) အဖြစ် သီးခြားရပ်တည်ခဲ့ကြပြီး Bratislava မြို့သည် ဆလိုဗက်ကီးယား၏မြို့တော် ဖြစ်လာခဲ့သည်။
ဆလိုဗက်လူမျိုး ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ဟန်ဂေရီလူမျိုး ၉ ရာခိုင်နှုန်းခန့် အဓိကနေထိုင် ကြသည့် ယင်းနိုင်ငံသည် ယခုအခါ မော်တော်ကားနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်း ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုး၍ လူတစ်ဦးချင်းဝင်ငွေများပြားကာ အေးချမ်းတည်ငြိမ် ပြီး ဥရောပတိုက်၌ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားသည့် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်သည်။ အထူး သဖြင့် အခွန်အကောက်နည်းပါးခြင်း၊ အင်တာနက်မြန်ဆန်ခြင်း၊ လူမှုဖူလုံရေးစနစ်ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်ခြင်းတို့ဖြင့်ထင်ရှားလှသည်။ ဥရောပအလယ်ပိုင်းတွင် အချက်အခြာကျ၍ နိုင်ငံတကာ ကုန်စည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးထွန်းကားရာ Bratislava မြို့သည် ဆလိုဗက်ကီးယား နိုင်ငံ၏ အနောက်တောင်ပိုင်း ဩစတြီးယားနှင့် ဟန်ဂေရီတို့ဆုံရာ နှစ်နိုင်ငံ၏ နယ်စပ်တွင်တည်ရှိပြီး ဥရောပတိုက်၌ ဘော်လ်ကာ(Volga) မြစ်ပြီးလျှင် ဒုတိယအရှည်ဆုံးဖြစ်သည့် ဒန်ညု(Danube) မြစ်က ၎င်းကို ဖြတ်သန်းစီးဆင်းလျက် ရှိသည်။ ဥရောပအလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ဥရောပကို ဖြတ်သန်းသွားသည့် ဒန်ညုမြစ်သည် ဂျာမနီမှစ၍ ဩစတြီးယား၊ ဆလိုဗက်ကီးယား၊ ဟန်ဂေရီ၊ ခရိုအေးရှား၊ ဆားဘီးယား၊ ဘူဂေးရီးယား၊ ရိုမေးနီးယား၊ မော်လ်ဒိုဗာနှင့် ယူကရိန်းစသည့် ၁၀ နိုင်ငံကိုဖြတ်ကျော် ပြီး ပင်လယ်နက်ထဲသို့စီးဝင်သော ထူးခြားသည့်မြစ်ကြီးဖြစ်သည်။ ထိုမြစ်ကမ်းတစ်လျှောက် ဩစတြီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ဗီယင်နာ(Vienna) မြို့၊ Bratislava မြို့၊ ဟန် ဂေရီနိုင်ငံမြို့တော် ဘူဒါပက်စ်(Budapest)မြို့နှင့် ဆားဘီးယားနိုင်ငံမြို့တော် ဘဲဂရိတ် (Belgrade)မြို့စသည့်မြို့တော်ကြီးများ တည်ရှိနေခြင်းကြောင့်လည်း ထင်ရှားလှသည်။
Bratislava မြို့တွင် နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ရှိ၍ ဗီယင်နာမြို့တော်၏ လေဆိပ်နှင့် လည်း မိုင် ၃၀ ကျော်သာ ကွာဝေးပြီး ရေလမ်း၊ ကားလမ်းနှင့် ရထားလမ်းတို့ဆုံရာ မြို့ဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းပြသထားသကဲ့သို့ ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသော ယင်းမြို့သို့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အများအပြားသွား ရောက်လေ့ရှိရာ စာရေးသူလည်း မကြာမီကရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ဗီယင်နာမြို့နှင့် ဘူဒါ ပက်စ်မြို့တို့မှ ယင်းသို့ နေချင်းပြန်လေ့လာရေးခရီးများ သွားရောက်လေ့ရှိကြသော် လည်း စာရေးသူတို့အနေဖြင့် ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဘူဒါပက်စ်မြို့မှ ချက်နိုင်ငံသို့ ပတ်ဝန်းကျင် တောတောင်ရှုခင်းများကို ကောင်းစွာမြင်တွေ့နိုင်ရန် ကားဖြင့်သွားစဉ် ယင်းမြို့သို့ ဝင်ရောက်လေ့လာဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
အချစ်အလွမ်းတို့ ထုံမွှမ်းရာ အိန္ဒိယမှ Taj Mahal
ခရီးသွားဝါသနာပါသူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အလျှောက် ကမ္ဘာပေါ်က ထင်ရှားတဲ့ အဆောက်အအုံအတော်များများဆီ ကျွန်မရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီထဲကမှ အိန္ဒိယက ကမ္ဘာကျော်တာ့ဂ်ျမဟာ (Taj Mahal) အဆောက်အအုံကြီးကတော့ အင်မတန် ထူးခြားလှပပြီး ကျွန်မရဲ့ စိတ်နှလုံးကိုပါ ဖမ်းစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ တာ့ဂ်ျမဟာက အိန္ဒိယ နိုင်ငံမြောက်ဘက်ရှိ အာဂရာ(Agra) မြို့ ယမုံနာမြစ်ကမ်းဘေးမှာတည်ရှိပြီး အိန္ဒိယ မှာသာမက ကမ္ဘာမှာပါ ထင်ရှားတဲ့ ဂူဗိမာန်ကြီးပါ။
သူ့ရဲ့ အဓိကထူးခြားချက်က အချစ်အလွမ်းတွေနဲ့ ထုံမွမ်းထားတဲ့ အချစ်သင်္ကေတ အဆောက်အအုံကြီး ဖြစ်လို့နေတာပါ။ မဂို(လ်)ဧကရာဇ် ရှာဂျဟန်က ကွယ်လွန်သွားတဲ့ ချစ်လှစွာသောမိဖုရား မွမ်တက်(ဇ်)မဟာကိုရည်စူးပြီး လှပတဲ့ အထိမ်းအမှတ်အဆောက် အအုံကြီးကို တည်ဆောက်ခဲ့တာပါ။ ဘုရင်ကြီးမှာ မိဖုရားအများကြီးရှိတဲ့အထဲမှ တတိ ယမြောက်မိဖုရားကြီးက သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးဖြစ်သလို အချစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အိမ် ထောင်သက် ၁၉နှစ်ကြာ ပေါင်းဖက်ခဲ့ရပြီး သားတော်သမီးတော်ပေါင်း ၁၄ဦး မွေးဖွား ခဲ့ပါတယ်။ အသက်၃၉နှစ်အရွယ်မှာ နောက်ဆုံးရင်သွေးမွေးဖွားပြီး မီးတွင်းမှာ ကွယ် လွန်သွားတာကြောင့် သေကွဲကွဲခဲ့ရပါတယ်။ ကာလရှည်ကြာစွာချစ်ခဲ့ရတဲ့ မိဖုရားကြီး ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်မှုက ဘုရင်ကြီးအတွက် ဖြေမဆည်နိုင်ဖြစ်ခဲ့ရပြီး မိဖုရားကြီး အလွမ်းပြေအဖြစ် ဂူဗိမာန်ဆောက်လုပ်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ကာ ကွယ်လွန်ပြီး တစ်နှစ်အကြာမှာ စတင်အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာနဲ့ တည်ဆောက်ခဲ့လို့လားတော့မသိဘူး။ အဆောက်အအုံကြီးက သိပ်ကိုလှပါတယ်။ အဆောက်အအုံတစ်ခုလုံးကို အဖြူရောင် စကျင်ကျောက်တွေနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ အဆောက်အအုံရဲ့ အဓိကအသက်က အလယ်မှာ ထီးထီး ကြီးရှိနေတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူဥလို ထိပ်ချွန်ချွန်အမိုးခုံးအဆောက်အအုံကြီးပါ။ အမိုးခုံးရဲ့ အမြင့်ပေကတင် ၁၁၅ပေရှိပြီး ထောင့်လေးထောင့်မှာ အမိုးခုံးငယ် ၄ခုက ဝန်းရံထားပါ တယ်။ အဆောက်အအုံအပြင်ဘက် ရင်ပြင်ရဲ့ ထောင့်လေးထောင့်မှာလည်း တိုင်လေး တိုင်စိုက်ထူထားခြင်းက အဆောက်အအုံကြီးကို ပိုလို့ကြွနေစေပါတယ်။ အဆောက်အ အုံကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ အမြင့်ပေကတော့ ၅၆၁ပေပါ။ မျှော်စင်လေးတိုင်ကို အပြင်ဘက်အ နည်းငယ်စောင်းပြီး ဆောက်ထားတာက်ိုတွေ့ရမှာပါ။ ငလျင်ဒဏ်ခံရပါက အလယ်က ဂူဗိမာန်ကြီးထံ ပြိုမကျအောင် တမင်အပြင်ဘက်စောင်းပေးထားတာပါ။ ဝင်းထဲမှာ ဥယျာဉ်ကျယ်ကြီး၊ အဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ အရိပ်ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ ရေကန် ကြီး၊ ဗလီနဲ့ အခြား ဂူဗိမာန်တွေလည်းရှိလို့နေပါတယ်။
တာ့ဂ်ျမဟာရဲ့ထူးခြားတဲ့အချက်နောက်တစ်ချက်က ဂူဗိမာန်ကြီးကို အချိန် ရယ်၊ အလင်းရောင်ရယ်ပေါ်မူတည်ပြီး အရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ မြင်တွေ့နိုင်တာပါ။ မနက် စောစော အာရုဏ်တက်စမှာ ပန်းသွေးရောင်သန်းကာ ညနေစောင်းမှာ ဖွေးဖွေးဖြူ နေတတ်ပြီး ညဘက်လရောင်အောက်မှာတော့ ရွှေရောင်ဝင်းနေတတ်ပါတယ်။ ဂူဗိမာန် ကြီး အရောင်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲမှုက အမျိုးသမီးတို့ရဲ့ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ စိတ်အထွေ ထွေကို ထင်ဟပ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
တာ့ဂ်ျမဟာရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က နန်းတော်တို့ရဲ့သရဖူလို့ သိရပါတယ်။ မဂို(လ်)တို့ရဲ့ ကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့ အင်ပါယာကိုထင်ဟပ်စေခဲ့တဲ့ သာဓကအဖြစ် အစ္စလာ(မ်)၊ ပါရှန်၊ အိန္ဒိယနဲ့ တူရကီ အော်တမာန် ဗိသုကာလက်ရာတွေ ပေါင်းစပ်လွှမ်းခြုံ ထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဂူဗိမာန်ကြီးကို ၁၆၃၂ခုနှစ်ကစတည်ဆောက်ခဲ့ပြီး ၁၆၅၂ခုနှစ်မှ အပြီး သတ်နိုင်ခဲ့တော့ အနှစ် ၂၀ကြာအောင် တည်ဆောက်ခဲ့ရတာပါ။ ဆောက်လုပ်ရေးအ တွက် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်သားပေါင်း ၂၂၀၀၀ ကျော်နဲ့ ဆောက် လုပ်ရေးပစ္စည်းတွေ သယ်ဆောင်ဖို့ ဆင်အစီးရေ ၁၀၀၀ တို့ကို အသုံးပြုခဲ့ရတယ်။
ဘုရင်ကြီးက ယမုံနာမြစ်တစ်ဖက်ခြမ်းမှာ တာ့ဂ်ျမဟာအဆောက်အအုံနဲ့ ပုံစံ တူ အနက်ရောင်ဂူဗိမာန်ကို သူကိုယ်တိုင်အတွက် တည်ဆောက်ဖို့စီစဉ်ခဲ့ပေမဲ့ သား တော်တွေနဲ့စစ်ဖြစ်ပြီး မဆောက်ဖြစ်လိုက်ရပါဘူး။ ဘုရင်ကြီးဟာ သူ့ဘ၀ရဲ့ နေဝင်ချိန် မတိုင်မီ နောက်ဆုံး၉နှစ်တာကာလမှာ သူသိပ်မြတ်နိုးရတဲ့ တာ့ဂ်ျမဟာကြီးထဲ ဝင် ခွင့်မရခဲ့တာလည်း ရင်နင့်စရာပါ။ ဘုရင်ကြီး နာမကျန်းဖြစ်ချိန်မှာ သားတော် အချင်းချင်းနန်းလုပွဲဖြစ်ကြပါတယ်။ ဘုရင်ကြီး ပြန်ကျန်းမာလာပေမဲ့ အခါနှောင်းသွားပါပြီ။ သားတော်နှစ်ပါး ရန်ပွဲမှာ သားတော်တစ်ပါးနဲ့ ပူးပေါင်းလိုက်ပေမဲ့ ထိုသားတော်ကျရှုံးပြီး သူကိုယ်တိုင်ပါ ထောင်နန်းစံခဲ့ရတာကြောင့်ပါ။
ဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ထူးခြားမှု၊ အဆောက်အအုံခမ်းနားလှပမှု၊ ဗိသု ကာလက်ရာမြောက်မှုတို့ကြောင့် ၂၀၀၇ခုနှစ်က အသစ်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ ကမ္ဘာ့အံ့ဖွယ် (၇)ခုစာရင်းထဲမှာလည်း ပါရှိနေကာ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ခရီးသွားများစွာ လာရောက်လေ့ ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဒဘာသာဘုရားကျောင်း Borobudur
အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာကျွန်းပေါင်း ၁၈၀၀၀ကျော်ရှိတဲ့အနက် ထင်ရှားကျော်ကြား တဲ့ ဂျာဗားကျွန်းဟာ ကျွန်းအလယ်ပိုင်းရှိ ဘောရောဗုဒ္ဓေါ ပုထိုးတော်ကြီး (Boro- budur Temple)ကြောင့် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များစွာလာရောက်လည်ပတ်ရာ ကျွန်း ဖြစ်နေပါတယ်။ ဘောရောဗုဒ္ဓေါ ပုထိုးတော်ကြီးက ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာ အဆောက်အအုံကြီးပါ။ အတိုင်းအတာအားဖြင့် ပုထိုးတော်ကြီးအောက်ခြေ စတုရန်းပုံရဲ့ အနားတစ်ဖက်ကို ပေပေါင်း ၃၈၇ပေရှိပါတယ်။ အမြင့်ပေကတော့ မူလက၁၃၇ပေ ရှိ တယ်လို့သိရပေမဲ့ ပြန်လည်ပြုပြင်လိုက်တဲ့အခါမှာ ၁၁၃ပေခန့်သာရှိပါတော့တယ်။
ပုထိုးတော်ကြီးကိုတည်ဆောက်ပုံက ထူးခြားပါတယ်။ ၅၅၀၀၀ ကုဗမီတာရှိတဲ့ ကျောက်သားတို့နဲ့ ပိရမစ်ပုံအထပ်ထပ်တည်ဆောက်ထားပြီး အထပ်ပေါင်း ၉ ထပ် ရှိပါတယ်။ အောက်ခြေစတုရန်းပုံခြောက်ထပ်ပေါ် စက်ဝိုင်းပုံသုံးထပ်တင်ကာ အပေါ် ဆုံးအထပ်ရဲ့ အလည်တည့်တည့်မှာ အဓိကစေတီပုထိုးကို တည်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကင်ယံမှ ကြည့်ပါက ပဒုမ္မာကြာတစ်ပွင့် ရေကန်အလယ်မှာပွင့်နေသလို ဖြစ် နေပါတယ်။ ပုထိုးတော်ကြီးက ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့ရဲ့ အထွတ်အမြတ်နေရာ တစ်နေရာ ဖြစ်ခဲ့ပြီး မြတ်စွာဘုရားရဲ့ နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားပြထားတဲ့ ဗိသုကာအယူအဆတွေ ကိုလည်း တွေ့ရမှာပါ။
စက်ဝိုင်းပုံအဆင့်၃ဆင့်ပေါ်တွင် အပေါ်ဆုံးစေတီရဲ့ပတ်ပတ်လည်မှာ တင်ပလ္လင် ခွေ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ပေါင်း ၇၂ဆူက ဝန်းရံထားပါတယ်။ ရုပ်ပွားတော်တစ်ဆူချင်းဆီကို အပေါက်တွေဖောက်ထားတဲ့ ခေါင်းလောင်းပုံစံ စေတီငုံထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ပုထိုး တော်ကြီး တစ်ခုလုံးပေါ်မှာတော့ ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ပေါင်း ၅၀၄ဆူနဲ့ ဇာတ်တော်များကို ဖော်ပြထားတဲ့ ဖောင်းကြွပန်းပုဘောင်ကွပ်ပေါင်း ၂၆၇၂ ခုရှိပါတယ်။
ပုထိုးတော်ကြီးရဲ့ တည်နေရာကလည်း ထူးခြားပါတယ်။ အရှေ့ဘက်ကို မျက်နှာ မူထားတဲ့ ပုထိုးတော်ကြီးဟာ ဂျာဗားကျွန်းရှိ ထင်ရှားတဲ့ မီးတောင်နှစ်တောင်နဲ့ မြစ် နှစ်စင်းအကြားက ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အမြင့် ၈၆၉ ပေ ရှိတဲ့ ကုန်းမြင့်ပေါ်မှာတည် ဆောက်ထားတာပါ။ ဘောရောဗုဒ္ဓေါပုထိုးတော်ကြီးကို ၉ ရာစု သေလိန္ဒြာမင်းဆက် လက်ထက် မဟာယာနဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားပြန့်ပွားစဉ် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့ကြပြီး နှစ်ပေါင်း၇၅နှစ်ကြာ တည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ တည်ဆောက်ခဲ့ တဲ့သူနဲ့ ဆောက်လုပ်ခဲ့ရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ကို မှတ်တမ်းတင် ကမ္မည်းရေးထိုးထား ခြင်း မတွေ့ရတာလည်း ထူးခြားပါတယ်။
၁၄ ရာစုနောက်ပိုင်း ဂျာဗားကျွန်းမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ဟိန္ဒူဘာသာ တိမ်ကောပြီး ကျွန်းသူကျွန်းသားများ အစ္စလာမ်ဘာသာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားချိန်တွင် ဘုရားကျောင်း ဆောင်ကြီးကို အချိန်အတော်ကြာ မေ့မေ့လျော့လျော့ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အနီးအနားက မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့် မီးတောင်ပြာများဖုံးလွှမ်းကာ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိချုံ နွယ်များကြောင့် ဘုရားကျောင်းကြီး တောတွင်းမှာ နစ်မြှုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီ လက်အောက်ရောက်တဲ့အချိန် ၁၈၁၄ ခုနှစ်မှ ဘုရင်ခံ သောမတ်စတန်းဖို့ဒ်ရက်ဖယ်လ် က ဒေသခံတို့ရဲ့ ပြောစကားမှတစ်ဆင့်သိရှိကာ ပြန်လည်ရှာဖွေ ဖော်ထုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ် တယ်လို့သိရပါတယ်။ ထိုနောက်ပိုင်းမှာ ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေ ပြု လုပ်ခဲ့ကြပြီး ၁၉၇၅ မှ ၁၉၈၂ ခုနှစ်အတွင်း အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရနဲ့ ယူနက်စကိုတို့ ပူးပေါင်းပြီး ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုတွေ အကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြတာပါ။
၂၀၁၂ခုနှစ်မှာ ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့စံချိန်စာရင်းထဲ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး ဗုဒ္ဓဘာသာဘုရား ကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြခြင်းခံရပြီး ၁၉၉၁ ခုနှစ်ကတည်းက ကမ္ဘာ့အမွေ အနှစ်စာရင်းဝင်ခဲ့တဲ့ ဘောရောဗုဒ္ဓေါဟာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား အမြောက်အမြား လာရောက်လည်ပတ်ရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်လို့နေပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွား လေးသန်းခန့် လာရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ ပုထိုး တော်ကြီးဆီ သွားချင်ပါက ယိုဂျာကာတာမြို့ကနေ အနောက်မြောက်ဘက်ကို ၁နာရီခွဲ လောက်ကားမောင်းသွားရင် ရောက်နိုင်ပါတယ်။ တက္ကသိုလ်ကျောင်းတွေ အများကြီး ရှိလို့ ပညာရေးမြို့တော်လို့ ခေါ်ရမယ့် ယိုဂျာကာတာမှာ လည်ပတ်စရာနေရာများပါတယ်။ အခြားဘာသာရေးကျောင်းဆောင်တွေ သွားရောက်ဖူးမြော်နိုင်သလို မီးတောင်တက် ခြင်း၊ လှေလှော်ခြင်းစတဲ့ စွန့်စားခြင်းတွေလည်း ပြုလုပ်နိုင်လို့ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသွား မယ်ဆိုရင်ဖြင့် ဘာလီကျွန်းအပြင် ယိုဂျာကာတာနဲ့ မြို့တော်ဂျာကာတာရှိရာ ဂျာဗား ကျွန်းကိုပါ သွားလည်သင့်ကြောင်း ညွှန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
လူတို့ဖန်တီးတဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်လျားဆုံး အဆောက်အအုံ မဟာတံတိုင်းကြီး
ချက်နိုင်ငံမှာ လေ့လာစရာ KUTNA HORA
Y-8 လေယာဉ်ပျက်ကျမှုအတွက် Black Box အဖြေကို နိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ စစ်ဆေးမည်